Neymar “ Messi waa saaxirka kubadda cagta” | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Neymar “ Messi waa saaxirka kubadda cagta”
Neymar “ Messi waa saaxirka kubadda cagta”
Posted by: Ahmed Haadi October 30, 2018
Muqdisho – Neymar ayaa sheegay in saaxiibkiisii hore ee Barcelona Lionel Messi uu yahay sanam waxaana uu ku tilmaamay Cristiano Ronaldo inuu yahay dabeysha kubadda cagta.
Weeraryahanka reer Brazil ayaa afar sanno ku soo qaatay isagoo ka garab ciyaari jirey Messi ee Nou Camp, isagoo kamid ahaa magacii dunida mar gil-gilay ee ‘MSN’ kuwaasi oo ka caawiyay Barcelona inay ku guuleysato labo horyaal oo La Liga ah, seddex Copa del Rey iyo Champions League waqtigiisii kooxda.
“Dhibaatada Messi iyo Cristiano Ronaldo -waxaan la ciyaaray Messi, aniga ahaan, mid ka mid ah ciyaartoyda ugu waa weyn kubadda cagta taarikhda, waana saaxirka kubadda cagta, “ayuu yiri Neymar.
“Messi, maalin kasta wax baan ka baranayay, inta lagu jiro wax-qabadkeenna, xilliga aan ciyaareyno, ama marka aan daawanayo isaga.Taasi waxay iga dhigtay mid xooggan, waxayna igu kordhisay awoodeyda garoonka sababtoo ah waxaan wax badan ka baranayey isaga.
“Cristiano Ronaldo, waa ciyaaryahan sida dabeysha ah,waa mid soo jiidasho, raaxo iyo sharaf ku dhehan,Waa mid ka mid ah ciyaartoyda kubadda cagta ugu weyn, waxaad heleysaa heegan, laakiin waqti isku mid ah ayaad wax badan baraneysaa sidoo kale.
“Sidaas darteed, waa labo ka mid ah ciyaartoyda weyn ee aan la xiriiri karo, sababtoo ah waxaan doonayaa inaan wax barto, waxaan doonayaa in aan badiyo dadaalkaasi, waxaan doonayaa koobab badan iyo goolal dheeri ah, sidaasi darteed ayaan maalin walba iyaga ka sii bartaa.”
Previous: Ivan Rakitic: “Real Madrid ma ahan mid xariif ah”
Next: Bernardo Silva: “Manchester United kama mid ahan kooxaha horyaalka u tartamya”